Wararkii ugu dambeeyay ee doorashada dalka Maraykanka -
Home News Wararkii ugu dambeeyay ee doorashada dalka Maraykanka
Wararkii ugu dambeeyay ee doorashada dalka Maraykanka
Maalintii saddexaad ayey galeysaa tirinta codadka doorashadii madaxtinimada Mareykanka, walina si rasmi ah looma shaacin cida ku guuleysatey.
Madaxweyne Trump iyo ninka ay loolamayaan ee Joe Biden ayaa ilaa iyo hadda ku guuleystey goboladii la filaayey in ay ku guuleystaan si ay u helaan codadka ergada wax doorata ee mareykanka ee loo yaqaan electoral College, si musharax ugu guuleysto doorashada madaxtinimada waa inuu helaa 270 ka mida 538 ergo doorasho.
Joe Biden ayaa illaa iyo hadda u dhow guusha madaxtinimada dalka Maraykanka isagoo haysto 253 cod halka Trump uu ka haysto 213 cod.
Barasaabka gobolka Pennsylvania, Tom Wolf, ayaa sheegay in tirinta codadka gobolkaas ay sii socon doonto, inkastoo ay jiraan dadaal ay kooxda ololaha Trump ku hor istaagayaan tirinta.
Waxay sheegeen in Dimuqraaddiyiintu ay isku dayayaan inay afduubtaan codadka Pennsylvania. Ku xigeenka madaxa ololaha Trump Justin Clark ayaa sheegay in Dimuqraaddiyiintu ay isku dayayaan inay musuqmaasuqaan codadka Jamhuuriga. Si kastaba, ma jiraan warar sheegaya inay dhacday ku shubasho.
Previous articleEngland enters second lock-in when the number of deaths in Covid reaches a maximum of six months
Next articleGuddoomiyaha Aqalka Sare oo ka soo horjeestey magacaabida Guddiga Doorashooyinka